ပရိသတ်တွေ အထင်အမြင်လွဲ အောင် နာမည်ကျော်ကြားမှုကို အသုံးချခံလိုက်ရတဲ့ မင်းမော်ကွန်း – Shwe Ba
ပရိသတ်တွေ အထင်အမြင်လွဲ အောင် နာမည်ကျော်ကြားမှုကို အသုံးချခံလိုက်ရတဲ့ မင်းမော်ကွန်း
ပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်ငံကျော် ပြည်သူချစ် မင်းသားချော မင်းမော်ကွန်း ဟာဆိုရင် အနုပညာလောက မှာဆိုရင် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသား တစ်လက် ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားတွေသမီးတွေရယ် ချစ်ဇနီးလေး ရယ်နဲ့ ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွွာဖြတ်သန်းနေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ မင်းမော်ကွန်းကတော့ အနုပညာနယ်ပယ် ထဲကို ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ကတည်းကစတင် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အကယ်ဒမီဆုကြီး တစ်ဆုကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ယခုချိန်အထိ အောင်မြင်မှု အရှိန်အဟုန်ရနေဆဲ မင်းသားချော တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါရင့် သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းမော်ကွန်းက ဒီတစ်ခါ မှာတော့ ရုပ်ရှင်လောက ထဲမှာ ပရိသတ်တွေ အထင်အမြင် လွဲစေလောက်တဲ့ အသုံးချမှုတွေခံ ခဲ့ရဖူးကြောင်းကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းက “ ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့ သဘောသဘာဝကို က ဇာတ်ကားကြည့်တဲ့အချိန်မှ ပရိတ်သတ်ကို surpriseဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်တာပါခင်ဗျ ာ။ ဧည့်သည်အဖြစ် ကူညီရိုက်ကူးပေးတဲ့ အနုပညာရှင် ရဲ့နာမယ်ကိုအသုံးချပြီး ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့ ကြော်ငြာဖို့ဇာတ်ကားလူကြည့်များအောင် အသုံးချဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက် နာမည်တွေကို ကြိုတင် မကြော်ငြာခြင်းဟာ ရိုးသားခြင်းသာဖြစ်ပြီး မလေးမစားပြုခြင်း မဟုတ်ပါခင်မျာ။ ဇာတ်ကားထဲမှာတော့ ဧည့်သည် ဘယ်သူဘယ်ဝါ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု title တွေထိုးရမှာပါ။ ဧည့်သည် အဖြစ်သာပါဝင်တဲ့ အနုပညာရှင်ရဲ့ နာမည်နဲ့ ကျော်ကြားမှုတွေ ကို အသုံးချကြော်ငြာပြီးတော့ ဇာတ်ကားထွက်လာမှ ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်မှန်း သိရတာမျိုးကသာ ပရိတ်သတ်ကို ရော၊ ဧည့်သည် အဖြစ်ပါဝင်ကူညီတဲ့ အနုပညာရှင်ကိုရော လိမ်လည်ေ စာ်ကားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ် ။”လို့ ပြောလာပါတယ်။
“PS . ဒီဇာတ်ကားက ကျွန်တော် ထုတ်လုပ်တဲ့ ဇာတ်ကား မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ဧည့်သည်အနေနဲ့ ကူညီပေးပြီး တကယ့် main casting လို မျိုးကြော်ငြာပြီးအသုံးချခံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ မပြောပေမယ့်လည်း စိတ်တော့ မကောင်းလို့ပါ။ တစ်ချို့ပရိတ်သတ်တွေကျတော့ ကျွန်တော်တို့က တစ်ခန်းနှစ်ခန်းပါပြီး လုပ်စားသွားတယ် ထင်ကြတာပါ” ဆိုပြီး သူပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “အရုပ်ကျရာဆေးစက်ထင်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အကြောင်းကို ပြောလာ ပါတယ်နော်။ ခုလို ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို အထူး ပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
Source ; Kyaw Kyaw Htay Lwin ‘s fb
Credit ;Cele Connections
ပရိသတ္ႀကီးေရ နိုင္ငံေက်ာ္ ျပည္သူခ်စ္ မင္းသားေခ်ာ မင္းေမာ္ကြန္း ဟာဆိုရင္ အႏုပညာေလာက မွာဆိုရင္ ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ မင္းသား တစ္လက္ ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သားေတြသမီးေတြရယ္ ခ်စ္ဇနီးေလး ရယ္နဲ႔ ဘဝကိုေပ်ာ္ရႊင္စြြာျဖတ္သန္းေနသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္ ။ မင္းေမာ္ကြန္းကေတာ့ အႏုပညာနယ္ပယ္ ထဲကို ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ကတည္းကစတင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီဆုႀကီး တစ္ဆုကို လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ယခုခ်ိန္အထိ ေအာင္ျမင္မႈ အရွိန္အဟုန္ရေနဆဲ မင္းသားေခ်ာ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဝါရင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ မင္းေမာ္ကြန္းက ဒီတစ္ခါ မွာေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ေလာက ထဲမွာ ပရိသတ္ေတြ အထင္အျမင္ လြဲေစေလာက္တဲ့ အသုံးခ်မႈေတြခံ ခဲ့ရဖူးေၾကာင္းကို ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။ မင္းေမာ္ကြန္းက “ ဧည့္သည္သ႐ုပ္ေဆာင္ဆိုတဲ့ သေဘာသဘာဝကို က ဇာတ္ကားၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွ ပရိတ္သတ္ကို surpriseျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္တာပါခင္ဗ် ာ။ ဧည့္သည္အျဖစ္ ကူညီရိုက္ကူးေပးတဲ့ အႏုပညာရွင္ ရဲ့နာမယ္ကိုအသုံးခ်ၿပီး ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ ေၾကာ္ျငာဖို့ဇာတ္ကားလူၾကည့္မ်ားေအာင္ အသုံးခ်ဖို႔မဟုတ္တဲ့အတြက္ နာမည္ေတြကို ႀကိဳတင္ မေၾကာ္ျငာျခင္းဟာ ရိုးသားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး မေလးမစားျပဳျခင္း မဟုတ္ပါခင္မ်ာ။ ဇာတ္ကားထဲမွာေတာ့ ဧည့္သည္ ဘယ္သူဘယ္ဝါ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ title ေတြထိုးရမွာပါ။ ဧည့္သည္ အျဖစ္သာပါဝင္တဲ့ အႏုပညာရွင္ရဲ့ နာမည္နဲ႔ ေက်ာ္ၾကားမႈေတြ ကို အသုံးခ်ေၾကာ္ျငာၿပီးေတာ့ ဇာတ္ကားထြက္လာမွ ဧည့္သည္သ႐ုပ္ေဆာင္မွန္း သိရတာမ်ိဳးကသာ ပရိတ္သတ္ကို ေရာ၊ ဧည့္သည္ အျဖစ္ပါဝင္ကူညီတဲ့ အႏုပညာရွင္ကိုေရာ လိမ္လည္ေ စာ္ကားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္ ။”လို႔ ေျပာလာပါတယ္။
“PS . ဒီဇာတ္ကားက ကၽြန္ေတာ္ ထုတ္လုပ္တဲ့ ဇာတ္ကား မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ ဧည့္သည္အေနနဲ႔ ကူညီေပးၿပီး တကယ့္ main casting လို မ်ိဳးေၾကာ္ျငာၿပီးအသုံးခ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ္ကားေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ မေျပာေပမယ့္လည္း စိတ္ေတာ့ မေကာင္းလို႔ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ပရိတ္သတ္ေတြက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္ခန္းႏွစ္ခန္းပါၿပီး လုပ္စားသြားတယ္ ထင္ၾကတာပါ” ဆိုၿပီး သူပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ “အ႐ုပ္က်ရာေဆးစက္ထင္” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး အေၾကာင္းကို ေျပာလာ ပါတယ္ေနာ္။ ခုလို ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးကို အထူး ပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။
Previous post ရိုးရိုးလေးသာဝတ်ခဲ့ပါ ဆိုသလို ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ လှနေတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်-
Next post ခုနစ်ရက်သားသမီး အလှူရှင်တွေအတွက်ပါ ရည်စူးလှူဒါန်းအမျှဝေပေးခဲ့တဲ့ မေတ္တာရှင်မလေး ခိုင်နှင်းဝေ